Dawladda hoose ee Galkacyo oo wada hawlgallo iskugu jira bannaynta waddooyinka iyo samaynta Boosteejooyin gaadiid oo cusub. – Radio Daljir
Dawladda hoose ee Galkacyo oo wada hawlgallo iskugu jira bannaynta waddooyinka iyo samaynta Boosteejooyin gaadiid oo cusub.
Galkacyo, Feb 01 ? Dawladda hoose ee magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland ayaa bilaabay hawlgallo cusub iskugu dhafan bannaynta waddooyinka iyo samaynta boosteejooyin cusub oo ay yeeshaan gaadiidka magaaladu.
Hawlgalkaan oo in muddo ah soo jiitamayey ayaa shalay dardargalin hor leh lagu sameeyey kadib markii ciidamada maamulka dawladda hoose ay ku dhaqaaqeen tallaabooyin ay ku maddaynayaan gaadiidka magaalada sida PL-ka iyo tagaasida caadiga ahba, waddooyinkana ay kaga aruurinayeen dhagxaanta iyo waxyaabaha kale ee xiray.
Waxaana hawlgalkii shalay lagu qabqabtay gaadiid badan oo si sharci darro ah u xirtay waddooyinka qaarka, isla markaana ku rakaabsaday hareeraha waddada laamiga ah taasi oo dhalisay cariiri iyo caddibaad aad u tiro badan oo dadka iyo gaadiidka kalaba ay la kulmeen, inkastoo markii danbe la sii daayey dhammaantood.
Kulan ay iskugu yimaadeen shalay intii hawlgalkaasi socday gaadiidlayda magaalada iyo maamulka dawladda hoose ayaa la iskula soo qaaday sidii looga wadashaqayn lahaa hormarka iyo bilicsamida magaalada iyadoo laga waan toobayo qorsho xumada ku saabsan qaababka gaadiidku ay waddooyinka u xiraan.
Maamulka iyo gaadiid layda ayaa isku afgartay in la sameeyo booteejooyin cusub oo ay ka rakaabsadaan gaadiidku, waxaana si gaar ah loo samayn doonaan baro cayiman oo gaadiidka PL-ka ahi ay ka rakaansan doonaan iyadoo meesha laga saarayo PL-laydu in ay dadka ka qaadaan waddada hareeraheeda amaba ay is taagaan xilliga ay dadka wadaan.
Dhanka kale maamulka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo waxay shalay illaa maanta ku hawlanaayeen bannaynta waddooyinka sida sharci darrada ah loo gooystay, iyagoo gaadiid ku daabulayey dhagxaanta iyo waxyaabaha kale oo la dhigtay guryaha hortooda, kuwaasi oo xiriiri badan ku haya waddooyinka.
Ciidamada maamulka dawladda hoose iyo qaar ka mid ah madaxda dawladda hoose ee magaalada Galkacyo oo uu ka mid yahay duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan, ayaa la arkayey shalay iyo maantaba iyagoo gacmahooda ku guraya dhagxaanta waddooyinka dhinacyadooda la dhigay, kuna daabulayey gaadiidka iska rogooyinka ah ee D/Hoose.
Qorshahaan uu wado maamulka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo ayaa looga golleeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo bidhaanta magaalada, waxaana taas barbar socda qorshe kale oo iskugu jira dhirayn iyo jardiinooyin laga sameeyey hareeraha waddada laamiga ah taasi oo isla maamulka dawladda hoose ay ku hawllan yihiin.